Ndị Eze nke Abụọ 23:1-37
Ihe ọma ndị Josaya mere (1-20)
Ndị Juda mere Ememme Ngabiga (21-23)
Ihe ọma ndị ọzọ Josaya mere (24-27)
Josaya nwụrụ (28-30)
Jehoahaz malitere ịchị Juda (31-33)
Jehoyakim malitere ịchị Juda (34-37)
23 Eze wee zie ozi, a kpọkọọ ndị okenye niile nọ na Juda na Jeruselem.+ 2 Eze na mmadụ niile bi na Juda na Jeruselem gaziri n’ụlọ Jehova, ma ndị nta ma ndị ukwu, ma ndị nchụàjà ma ndị amụma. Ọ gụpụtaara ha ihe niile e dere n’akwụkwọ+ ọgbụgba ndụ ahụ+ a hụrụ n’ụlọ Jehova.+ 3 Eze guzo n’akụkụ ogidi, ya na Jehova agbaa ndụ*+ na ya ga na-eso Jehova nakwa na ya ga-eji obi ya niile na mkpụrụ obi* ya niile na-edebe iwu ya, na-eme ihe o kwuru, na-esokwa ntụziaka ya. O kwukwara na otú ọ ga-esi eme ya bụ ịna-eme ihe e kwuru n’akwụkwọ ọgbụgba ndụ a. Mmadụ niile wee kweta na ha ga na-eme ihe e kwuru n’ọgbụgba ndụ ahụ.+ 4 Eze gwaziri Hilkaya,+ bụ́ nnukwu onye nchụàjà, ndị nchụàjà ibe ya, na ndị na-eche ọnụ ụzọ nche, ka ha wepụta arịa niile dị n’ụlọ nsọ Jehova, bụ́ ndị a rụrụ iji na-efe Bel, ogwe osisi arụsị,*+ na ihe niile dị n’eluigwe. Mgbe ha wepụtachara ihe ndị ahụ, o suru ha ọkụ n’azụ Jeruselem, n’ala dị na Ndagwurugwu Kidrọn. O kpokwaara ntụ ha gaa Betel.+ 5 Ọ chụpụrụ ndị nchụàjà chi ndị ala ọzọ, ndị ndị eze Juda họpụtara ka ha na-esu àjà ọkụ n’ebe ndị dị elu n’obodo ndị dị na Juda nakwa n’obodo ndị gbara Jeruselem gburugburu. Ọ chụpụkwara ma ndị na-esuru Bel àjà ọkụ, ma ndị nke na-esuru anyanwụ, ọnwa, ìgwè kpakpando a na-akpọ zodịak, na ihe niile dị n’eluigwe.+ 6 O si n’ụlọ Jehova bupụ ogwe osisi arụsị,*+ buga ya na Ndagwurugwu Kidrọn, n’azụ Jeruselem, suo ya ọkụ+ ebe ahụ, gweriekwa ya ya aghọọ ntụ. Ọ wụsasịkwara ntụ ya ebe a na-eli ndị nkịtị.+ 7 Ọ kwatukwara ụlọ ndị dị n’ụlọ Jehova ebe ụmụ nwoke bụ́ ndị akwụna*+ na-anọ, ebe ụmụ nwaanyị na-anọkwa akpa ákwà ụlọikwuu a na-eji efe ogwe osisi arụsị.* 8 Ọ kpọpụtakwara ndị nchụàjà niile nọ n’obodo ndị dị na Juda, meekwa ka a gharazie ịnọ n’ebe ndị dị elu na-efe ofufe. Ebe ndị ahụ dị elu, ndị dị malite na Giba+ ruo Bia-shiba,+ ka ndị nchụàjà na-anọ esu àjà ọkụ. Ọ kwatukwara ebe ndị dị elu, ndị dị n’ọnụ ụzọ ámá Joshụa, bụ́ onyeisi obodo. Ọnụ ụzọ ámá a dị n’aka ekpe ma e si n’ọnụ ụzọ ámá obodo ahụ na-abata. 9 Ndị nchụàjà ndị na-anọ ebe ndị dị elu achụ àjà anaghị achụ àjà n’ebe ịchụàjà Jehova dị na Jeruselem.+ Mana, ha na-eso ndị nchụàjà ibe ha* ata achịcha na-ekoghị eko. 10 Eze mekwara ka a gharazie ịnọ na Tofet,+ nke dị na Ndagwurugwu Ụmụ Hinọm,*+ na-efe ofufe, ka onye ọ bụla ghara ịkpọ nwa ya nwoke ma ọ bụ nwa ya nwaanyị ọkụ, jiri ya chụọrọ Molek+ àjà. 11 O mekwara ka ịnyịnya ndị eze Juda nyere ka e jiri na-efe anyanwụ kwụsị isi n’ụlọ* Netan-melek, bụ́ onye na-eje ozi n’obí eze, abata n’ụlọ Jehova. Ụlọ a dị n’ebe a rụnyere ihe n’ụzọ e si abata n’ụlọ nsọ. Eze gbakwara ụgbọ ịnyịnya ndị a na-eji efe anyanwụ+ ọkụ. 12 Ọ kwatukwara ebe ịchụàjà niile ndị eze Juda rụrụ n’elu ụlọ+ elu Ehaz, kwatusịakwa ebe ịchụàjà niile Manase rụrụ n’ogige abụọ dị n’ụlọ Jehova.+ Ọ kụriri ha ma wụfuo ntụ ha na Ndagwurugwu Kidrọn. 13 Eze mekwara ka a gharazie ịnọ n’ebe ndị dị elu chere Jeruselem ihu na-efe ofufe. Ha dị n’ebe ndịda* Ugwu Mbibi.* Ọ bụ Solomọn eze Izrel rụrụ ha. O nwere nke ọ rụrụ ka a nọrọ na-efe Ashtọret, bụ́ chi* rụrụ arụ ndị Saịdọn na-efe, nwee nke ọ rụrụ ka a nọrọ na-efe Kimọsh, bụ́ chi rụrụ arụ ndị Moab na-efe, nweekwa nke ọ rụrụ ka a nọrọ na-efe Milkọm,+ bụ́ chi rụrụ arụ ndị Amọn na-efe.+ 14 Ọ kụrisịkwara ogidi arụsị, gbutuchaakwa ogwe osisi arụsị,*+ wụjuokwa ọkpụkpụ ndị mmadụ ebe ogidi na ogwe osisi ndị ahụ dịbu. 15 Ọ kwatukwara ebe ịchụàjà na ebe dị elu dị na Betel, nke Jeroboam nwa Nibat rụrụ, nke mekwara ka ndị Izrel mehie.+ Mgbe ọ kwatuchara ebe ịchụàjà ahụ na ebe ahụ dị elu, ọ gbara ebe ahụ dị elu ọkụ, gwerie ya ka ọ ghọọ ntụ, gbaakwa ogwe osisi arụsị*+ ahụ ọkụ. 16 Mgbe Josaya tụgharịrị hụ ili ndị dị n’ugwu ahụ, o ziri ndị mmadụ, ha agaa chịpụta ọkpụkpụ ndị dị na ha, suokwa ha ọkụ n’elu ebe ịchụàjà ahụ. Ihe a mere ka a gharazie ịnọ n’ebe ịchụàjà ahụ na-efe ofufe. O mezukwara ihe Jehova si n’ọnụ onye nke ezi Chineke kwuo na ọ ga-eme.+ 17 Josaya jụkwara ndị obodo ahụ, sị: “Ònye ka e liri ebe ahụ m na-ahụ nkume na-egosi ebe e liri mmadụ?” Ha asị ya: “Ọ bụ ili otu onye nke ezi Chineke si Juda+ bịa buo amụma gbasara ihe a i mere ebe ịchụàjà dị na Betel.” 18 Ya asị ha: “Onye akpala ọkpụkpụ ya aka. Hapụnụ ya ebe ahụ.” N’ihi ya, ha hapụrụ ọkpụkpụ ya na ọkpụkpụ onye amụma ahụ si Sameria bịa.+ 19 Josaya kwatukwara ụlọ niile a na-anọ efe ofufe n’ebe ndị dị elu n’obodo ndị dị na Sameria.+ Ọ bụ ndị eze Izrel rụrụ ha, si otú ahụ kpasuo Chineke iwe. Josaya mere ụlọ ndị ahụ ihe niile o mere ebe dị elu na Betel.+ 20 O gbukwara ndị nchụàjà niile nọ ebe ahụ, ndị na-achụ àjà n’ebe ndị dị elu. O gburu ha n’elu ebe ịchụàjà ndị ahụ, kpọọkwa ọkpụkpụ ndị mmadụ ọkụ n’elu ebe ịchụàjà ndị ahụ.+ Mgbe o mechara, ọ laghachiri Jeruselem. 21 Eze gwakwara mmadụ niile, sị: “Meerenụ Jehova bụ́ Chineke unu Ememme Ngabiga+ otú e dere n’akwụkwọ ọgbụgba ndụ a ka a na-eme.”+ 22 E metụbeghị ụdị Ememme Ngabiga a ma n’oge ndị ikpe na-ekpere Izrel ikpe ma n’oge niile ndị eze Izrel na ndị eze Juda ndị ọzọ chịrị.+ 23 Ma, n’afọ nke iri na asatọ n’ọchịchị Eze Josaya, e meere Jehova Ememme Ngabiga a na Jeruselem. 24 Josaya bibikwara ndị na-agba afa, ndị na-akọ ihe ga-eme n’ọdịnihu,+ arụsị ezinụlọ,*+ arụsị dị iche iche na-asọ oyi,* na ihe niile rụrụ arụ dị na Juda nakwa na Jeruselem. O si otú a mee ihe e kwuru n’Iwu ahụ+ e dere n’akwụkwọ ahụ Hilkaya onye nchụàjà hụrụ n’ụlọ Jehova.+ 25 O nweghị eze dị ka ya ná ndị eze niile bu ya ụzọ. O ji obi ya niile na mkpụrụ obi*+ ya niile na ike ya niile lọghachikwute Jehova. O mere ihe niile Iwu Mosis kwuru. O nweghịkwa onye dị ka ya mgbe ọ nwụchara. 26 Ma, Jehova akwụsịghị iwesa ndị Juda ezigbo iwe ọ nọ na-ewesa ha n’ihi ihe niile na-akpasu ya iwe Manase mere.+ 27 Jehova sịrị: “M ga-ewepụ Juda n’ihu m,+ otú m wepụrụ Izrel.+ M ga-ajụkwa Jeruselem, bụ́ obodo m họọrọ. M ga-ajụkwa ụlọ ahụ m kwuru gbasara ya, sị, ‘Aha m ga-adịgide na ya.’”+ 28 E dere akụkọ ndị ọzọ gbasara Josaya na ihe niile o mere n’akwụkwọ e dere ihe ndị mere n’oge ndị eze Juda. 29 N’oge ọ na-achị, Fero Niko eze Ijipt gara ka ọ lụso eze Asiria agha n’akụkụ Osimiri Yufretis, Josaya agaa ịlụso Fero Niko agha. Ma mgbe Niko hụrụ ya, o gburu ya ebe dị nso na Megido.+ 30 Ndị na-ejere ya ozi wee jiri ụgbọ ịnyịnya si Megido bulata ozu ya Jeruselem, liekwa ya n’ili ya. Ndị Juda wee kpọrọ Jehoahaz nwa ya tee ya mmanụ, chie ya eze, ya anọchie nna ya.+ 31 Jehoahaz+ dị afọ iri abụọ na atọ mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị ọnwa atọ na Jeruselem. Aha nne ya bụ Hamutal+ nwa Jeremaya onye Libna. 32 Jehoahaz nọkwa na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, otú nna nna ya hà mere.+ 33 Fero Niko+ wee kwụsị ya ịchị na Jeruselem ma tụọ ya mkpọrọ na Ribla+ dị na Hemat. Ọ manyekwara ndị Juda ka ha kwụọ ya otu narị (100) talent* ọlaọcha na otu talent ọlaedo.+ 34 Fero Niko chikwara Elayakim nwa Josaya eze ka ọ nọchie Josaya nna ya. Ọ gbanwere aha ya, a kpọwazie ya Jehoyakim. Ma, ọ kpọọrọ Jehoahaz kpọta Ijipt,+ ọ bụkwa ebe ahụ ka ọ nọ nwụọ.+ 35 Jehoyakim kwụrụ Fero ọlaọcha na ọlaedo ahụ ọ manyere ya ịkwụ, ma o kere ndị obodo ya ụtụ iji nweta ihe o ji kwụọ ya. O kenyere onye ọ bụla nọ n’obodo ahụ ọlaọcha na ọlaedo ole ọ ga-eweta otú aka onye nke ọ bụla hà. Otú a ka o si kwụọ Fero Niko ụgwọ ahụ. 36 Jehoyakim+ dị afọ iri abụọ na ise mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ iri na otu na Jeruselem.+ Aha nne ya bụ Zebaịda nwa Pedaya, onye Ruma. 37 Ọ nọkwa na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova+ otú nna nna ya hà mere.+
^ Ma ọ bụ “agbaa ndụ ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “ndị na-agba akwụna n’ụlọ arụsị.” O nwere ike ịbụ na ịgba akwụna a bụ ụdị nke e ji efe chi dị iche iche.
^ Na Hibru, “ụmụnne ha.”
^ Gụọ Nkọwa Okwu, “Gehena.”
^ Ma ọ bụ “n’ụlọ a na-anọ eri nri na nke.”
^ Na Hibru, “n’aka nri.” Ya bụ, ebe ndịda, ma mmadụ chee ihu ebe ọwụwa anyanwụ.
^ Ya bụ, Ugwu Oliv, karịchaa, ná mgbada mgbada ebe ndịda ya nke a na-akpọkwa Ugwu Imebi Iwu.
^ Na Hibru, “terafim.”